Management Accounting in Businesses — Balance Professional Services
Management Accounting ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာအတွက်လဲ?
Management Accounting ဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အရေးပါတဲ့ ရေရှည်၊ ရေတိုဆုံးဖြတ်ချက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ချမှတ်နိုင်ရန် လိုအပ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေး/ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပက်သက်သော စာရင်းဇယား Report တွေ၊ Account တွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရာမှာ Management Accounting ကရလာတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို မှီငြမ်းရပါတယ်။ Management Accounting ကတော့ Financial Accounting နဲ့ သဘောသဘာ၀ မတူပါဘူး။ Financial Accounting ကလုပ်ငန်းတွင်းရှိလူများသာမက အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းပြင်ပမှာရှိတဲ့ လူများကို လုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်သော ငွေရေးကြေးရေးအချက်အလက်တွေ ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ။ ဘဏ်ချေးငွေအတွက် Statement of Financial Position တင်ပြတာ) Management Accounting ကတော့လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Strategic Decision/ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရာမှာ အချက်အလက်များနဲ့ အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - စောစောကလို့ လုပ်ငန်းအတွက် ဘဏ်ကနေငွေချေးမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောက်ဖို့ ချင့်ချိန်တဲ့အခါမျိုးမှလိုအပ်တဲ့ Report တွေ)
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Management Accounting ၏အရေးပါမှုများ
Helping Forecast the Future (အနာဂတ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း)
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဟာ အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်တဲ့နေရာမှာသာမက မေးခွန်းတော်တော်များများအတွက်လည်း အဖြေရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် ပိုပြီးရင်းနှီးမြှပ်နှံသင့်သလား ?
ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေကို ဈေးကွက်ပေါင်းစုံကိုတင်ပို့ ရောင်းချသင့်သလား ?
နောက်ထပ် လုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်ပြီး ထူထောင်သင့်လား စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
Management Accounting ကတော့ အဲလိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းများကို အဖြေရှာတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ပြီး အနာဂတ်အတွက် လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်သော ခန့်မှန်းချက်များအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မလား၊ ဝယ်မလားဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အရေးပါခြင်း (Helping in Make or Buy Decision)
လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို အပြင်မှ မှာယူတင်သွင်းမလား ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းအတွင်းမှာပဲ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မလား?
အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ထက် သက်သက်သာသာ ထုတ်လုပ်လို့ ရနိုင်/မရနိုင်ဆိုတဲ့ အချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်ကို Risk/ စွန့်စားမှုအနည်းဆုံးနဲ့ကျော်လွှားဖို့ဆိုရင် အဘက်ဘက်က သုံးသပ်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ -
Risk Management (အရဲစွန့်လုပ်ဆောင်ရာမှာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲခြင်း) တွေ၊
Cost Management (ကုန်ကျစရိတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း) တွေ၊
Feasibility Studies (ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် လေ့လာခြင်း) တွေ၊
Leveraging Opportunities (ပေးလာတဲ့ အခွင့်အလမ်းများထဲမှ အကောင်းဆုံးကိုနှိုင်းယှဥ်ရွေးချယ်ခြင်း) တွေစတဲ့ မန်နေဂျာအဆင့် လေ့လာမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။
အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံး ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်က Management Accounting ပဲဖြစ်ပါတယ်၊
Management Accounting တွင်ဘက်ဂျက်များ ရေးဆွဲရာသာမက ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းများလည်း ပါရှိပါတယ်။ ထပ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်
ငွေကြေးလည်ပတ်မှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း (ငွေကြေးလည်ပတ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်တွင် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ခန့်မှန်းခြင်းသည် စီးပွားရေးတစ်ခု၏ အသက်ဖြစ်ပါတယ်)။ အနာဂတ်မှာ ငွေကြေးဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်သလဲ ? ဝင်ငွေများ ဘယ်နေရာကနေ ဝင်လာနိုင်သလဲ ? အနာဂတ်မှာ အမြတ်အစွန်းပိုများလာမလား၊ အရှုံးပိုများလာမလား ? စတာတွေပါ။
လုပ်ငန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြောင်းလဲမှု/ ကွဲလွဲမှုများကို ပိုပြီးနားလည်စေရန် အထောက်အကူပြုခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားခြားနားချက်တွေဆိုတာက ခန့်မှန်းထားတာနဲ့ တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုခေါ်ပါတယ်။Management Accounting ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုများကို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက် ပေးပြီးအနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ ကွဲပြားခြားနားခြင်းများကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခိုင်းရန် ကူညီပေးပါတယ်။
Rate of Return ကို စီစစ်အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်း
Rate of Return ဆိုတာကတော့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါ အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ငွေဘယ်လောက် ပြန်ဝင်လာမလဲဆိုတဲ့နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအနှီးများတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုခင်မှာ Rate of Return ကို သေချာစီစစ် အကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသင့်တဲ့ လုပ်ငန်း ၂ခု (သို့) ၃ခု လောက်ရှိတယ် ဆိုပါစို့အမြတ်အစွန်း အများဆုံးရနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းကိုဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ ? အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှ အရင်းကျေမှာလဲ၊ ၅ နှစ်လား ?၊ ၁၀ နှစ်လား ? ငွေစီးဆင်းမှုနှုန်းတွေကကော ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲ ? အထက်ပါမေးခွန်းများကို Management Accounting မှတဆင့် အကောင်းဆုံး ဖြေဆိုပေးနိုင်ပါသည်။
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe October 4, 2018 Accounting, Business Advice